Tonga, omaly, tetsy Ivato: tafody ireo roa lahy… ny volamena 49 kg nogiazan’ny Kaomorianina | NewsMada
Nigadona, omaly, teny Ivato, ireo teratany malagasy roa lahy voasaringotra tamin’ilay volamena 49 kg, sarona tatsy Kaomoro. Efa an-dalana koa ny fampodiana ireo telo lahy atsy Afrika Atsimo. Tsy mbola misy resaka kosa ny famerenana ireo volamena any amin’ireo firenena ireo.
Hiroso amin’ny famotorona sy fanadihadiana azy ireo roa lahy ireo ny fitsarana eto an-toerana, amin’izao fahatongavany eto izao, niaraka amin’ny minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, avy atsy Kaomoro. Nanaiky ny hamerenana an-tanindrazana ireto voarohirohy ao anatin’ny tambajotra mpanondrana ny harem-pirenena ireto izany ny ao amin’ity Nosy ity.
Na izany aza, tsy nomen’ny fanjakana kaomorianina hatreto ilay volamena fa nogiazany. Efa nolavin’izy ireo hatramin’ny farany tamin’ny dinika nifanaovan’ny roa tonta tany an-toerana izany, afakomaly. Tsy nanaiky hatramin’ny farany izany ny tomponandraikitra atsy Kaomoro.
Neken’i Afrika Atsimo ny famerenena ireo telo lahy
Ankoatra izany, nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Rajoelina Patrick koa omaly, tetsy Anosy fa nanaiky ny hampodiana an-tanindrazana ireo Malagasy telo lahy, voarohirohy amin’ilay volamena 73,5kg any Afrika Atsimo ny filohan’io firenena io. Niainga tamin’ny taratasy fangatahana, nalefan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny tany an-toerana izany ary izao nekena izao. “Eo am-piandrasana ny pitsopitsony ara-pitsarana sisa ny fampodiana azy ireo”, hoy izy.
Tsy nisy resaka koa fa mbola nogiazan’ny Afrikanina Tatsimo ilay volamena.
Hatreto izany, tsy nisy namerina fa nogiazan’ireo firenena nahatrarana ny harem-pirenentsika avokoa ny volamena. Tsy misy manaiky ny hamerenana izany ireo firenena ireo.
Volamena atsy Sceychelles sy i Maorisy
Anisan’izany raharaha izany koa ny tsy fahitana ny tohin’ilay volamena milanja 22,5kg sarona tany Sceychelles rehefa niainga tao Nosy Be, ny 12 oktobra 2021 teo. Tahaka izany koa ilay volamena 25,5 kg niondrana an-tsokosoko tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny taona 2019. Mbola tazonin’ny fitondrana maorisianina any aminy hatramin’izao na eo aza ny ezaka ara-diplaomatika, nambara fa hamerenana izany eto an-tanindrazana.
“Trondro vaventy” anaty tambajotra
Mandram-piandry izany, tokony ho hita ny tena “Trondro vaventy” sy ny atidoha amin’ireo raharaha volamena ireo. Voalaza ho tambajotra “Mafia” mihitsy ary efa imbetsaka nanao izany fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena izany. Araka izany, mitodika any amin’ny fitsarana ny mason’ny rehetra.
Azaly Failaza Pacheco ilay Malagasy ireo sarona tatsy Kaomoro. Injeniera amin’ny infromatika ary teraka ny 5 mey teto Antananarivo. Efa impito nivezivezy teto sy tao amin’io Nosy io. Niantoka ny fanelanelanana sy ny fanamorana ny fanondranana ny volamena ny tenany. Pierre Steny kosa ilay Malagasy iray ary 25 taona. Namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny 28 desambra teo izy roa lahy ireo ary nenjehana noho ny hosoka sy fikambanan-jiolahy ary fanaovana kolikoly amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Anisan’ny ahiana ho mpiray tendro amin’ilay volamena 73,5kg tatsy Afrika Atsimo koa izy roa lahy. Voasambotra miaraka amin’ny namany valo hafa ary efa notanana am-ponja vonjimaika tany Kaomoro izy ireo.